Ebumnuche Mere Ndị Mmadụ Ji Ahapụ tszụ ahịa | Martech Zone
Monday, August 6, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Gaghị enweta 100% nke ahịa mgbe mmadụ gbakwunyechara ngwaahịa gị na ụgbọ ibu azụmahịa gị, mana obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ọdịiche ebe ego na-abawanye. Enwere usoro iji dọta ndị mmadụ azụ na… ịtụgharị uche bụ otu n'ime ha. Mgbasagharị ahịa na-esochi ndị mmadụ mgbe ha hapụrụ ụgbọ ahịa na mgbasa ozi na-ebugharị ha ka ha na-eleta saịtị ndị ọzọ. Nloghachi ahụ dị mma na mkpọsa nlọghachi.
Otú ọ dị, nke ahụ bụ mgbe ha ahapụla… olee maka tupu ha ahapụ? Inye ndepụta ndị chọrọ, mbupu ụgbọ mmiri, ọnụahịa na nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịme ihe dị iche na otu ndị folks si gbanwee. Data sitere na comScore gbakọtara na infographic a site na Milo, Enweghị Cartgbọ Aka ekpe: Ihe Mere Ndị Na-azụ Ihe Anaghị Azụta na Onlinezụta Ntanetị.
Nzụ ahịa nke windo anaghị efu na ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Nnyocha na-egosi ọnụọgụ dị ukwuu nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-ejupụta ụgbọ ala ha ma hapụ ha na nkeji ikpeazụ. Kedu ihe na-egbochi ndị ahịa a ịgafe n'ụzọ niile? Anyị na-ele anya na ọmụmụ ihe ọhụrụ ahụ site na comScore iji chọpụta.
Tags: ịgbahapụakakabaredenjikarịcha ntụgharịecommerceinfographicmiloụgbọ ibu azụmahịaịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụ